Mogadishu Journal » AMISOM oo dalbatay dhaqaalo lagula dagaalamo xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya
AMISOM oo dalbatay dhaqaalo lagula dagaalamo xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya
Mjournal :-Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa sheegay in ay u baahan yihiin Dhaqaale deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo si looga guuleysto dagaalyahannada xogaga Al-Shabaab.
Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya Francisco Caetano Madeira ayaa oo wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa sheegay inay u baahan yihiin taageero degdeg ah.
“Waxaan u baahan nahay taageero deg deg ah, Ciidankeenu waa diyaar, laakiin waxay u baahan yihiin in ay noqdaan kuwo kobciya, tani ma aysan noqon wixii laga filayey, inkasta oo ay ku soo noqnoqonayaan ballan-qaadyadii ay sameeyeen wada-hawlgalayaasha.” Ayuu yiri Madeira.
Madeira ayaa ka digay hadii la waayo dhaqaale in halis ay geli karto ku guuleysiga ee dagaalka lagula jiro ururka Al-shabaab Tobankii sano ee la soo dhaafay, kaasi oo ka socda Soomaaliya.
“Soomaaliya xasiloonida muhiim ayay u tahay iyo guud ahaan xasilloonida gobolka Bariga Afrika iyo wixii ka baxsan, haddii aanan si xeeladaysan u wajihin khatarta Al-Shabaab, waxay sii wadi doonaan inay khatar galiyaan Gobolka,” Ayuu sidoo kale yiri Francisco.
Wuxuu kaloo sheegay Madeira in qorshooyinka AMISOM ee 2018 ay ka mid yihiin in loo wareejiyo saldhigyo waa weyn oo hor leh oo ku yaala guud ahaan Soomaaliya oo ay ku wajahan yihiin Ciidamada xoogga dalka.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa Mareykanka ayaa isku diyaarinaya weeraro culus oo ay Al-shabaab kaga saarayaan goobahooda ay ku xoogganyihiin Jubbooyinka iyo Gobolada kale ee dalka.
Talaadadii, ayuu Wasiirka Difaaca Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in qiimeyn ay samaysay xukuumaddu ay ogaatay in qiyaastii boqolkiiba 30 Askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya aysan hubeysneyn.
Kismaayo oo laga soo dhaweeyay guusha xulka Kubadda Cagta Jubbaland